Ma jiri doono Netflix loogu talagalay Linux ... ugu yaraan hadda | Laga soo bilaabo Linux
Ma jiri doono Netflix loogu talagalay Linux ... ugu yaraan hadda
Bishii Luulyo ee sanadkii hore, dhammaadka Shirka Isha Furan (OSCON) ayaa soo baxay xanta Taasi waxay xoogaa rajo u keentay bulshada Linux.
Waqtigaas, laba injineer oo ka yimid Netflix waxay qirteen inay ahaayeen shaqeeya lagu dubo taageerada waddanka waayo, Linux iyo in warar dheeri ah la filayo sanadka soo socda. Ugu dambeyntii, dhammaantood waxay ahaayeen been abuur weyn. Maalin dhaweyd waxaan helnay xukunkii ugu dambeeyay.
"Ma jiro wax qorshe ah oo lagu taageerayo Netflix barnaamijka Linux," ayuu yiri Joris Evers, oo ah Agaasimaha Xiriirka Shirkadaha ee Netflix.
Waxaa laga yaabaa in injineerada Netflix ay khaldanaayeen ama laga yaabo in mashruuca la joojiyey, runta ayaa ah inaanan waligeen ogaan doonin waxa dhacay ama haddii mar uun la damacsanaa in Netflix la jaan qaado Linux, laakiin aan rajeyno in dadka Netflix maalin uun aad arki doontid qiimaha maalgashiga barnaamijyada bilaashka ah.
Beddelka? Sida muuqata habka kaliya ee lagu heli karo Netflix oo ka shaqeynaya Linux waa iyada oo loo marayo mashiin farsameed. Haa, maahan wax ku habboon, laakiin waa waxa kaliya ee shaqeynaya. Khamri? Siverlight ma shaqeynayo. Iftiinka Dayaxa? Ma taageerto DRM. Emulator-ka Android ee ku shaqeeya barnaamijka Netflix? Caqli! XBMC? Waxay ubaahantahay Silverlight.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Ma jiri doono Netflix loogu talagalay Linux ... ugu yaraan hadda
Alexander Abarca R. dijo
Iyagu waa inay furaan anaguna shaqada ayaan qabaneynaa, yaan la kala furin.
Jawaab Alejandro Abarca R
netflix ball of assholes, waxay nagu takooraan isticmaalka Linux, waxaan doorbidayaa inaan sii wado soo dejinta filimada internetka kahor intaanan kabaxsan ubuntu
Linux ha noolaato
Ku jawaab pedroschme
William Moreno-Reyes dijo
Waxaa jira laba naga mid ah, waxaan qarka u saarnaa inaan iska diiwaangeliyo Netflix laakiin haddii aysan ka socon Fodora ama Ubuntu waa wax aan faa'iido lahayn, sinaba looma sii wadi karo soo dejinta filimada internetka.
Jawaab William Moreno Reyes
Haa haa, haa: Netflix kuma shaqeynayo Linux waana sababta aan u noqonayo tuug-tuug. Blockbuster wali wuu nool yahay, dadow; waliba shineemo. Waxaan u arkaa inay tahay wax laga xishoodo in maxaa yeelay adeegga filimada uusan kuu sii shaqeynaynin Linux, waxaad horeyba u heshay cudurdaar ah "inaad ku soo dejiso filimada Torrent" ama aad u daawato si sharci darro ah.
Waxaan ka fiicanahay inaan u daayo nabada. Haddii aad rabto, shirkaduhu waxay isu soo uruurinayaan inay Netflix ka shaqeeyaan Linux: http://www.petitiononline.com/Linflix/petition.html
Waa maxay doqon aad aqrisay!
Blockbuster waa imisa? $ 5 ilaa $ 10 filimkiiba, waxaan qiyaasayaa. Isku mid shineemooyinka.
Ma aragtay in Netflix ay ku dhowdahay $ 8?
Laakiin, ugu muhiimsan: Ma aragtay in kuwa ka cawday Netflix oo aan ka shaqeynayn GNU / Linux ay sameeyeen sababta oo ah waxay rabaan inay daawadaan filimada ON GNU / Linux? Hadday sidoo kale DRM la'aanteed ahayd, iyo haddii ay xitaa sharci ahaan lahayd, maxaa ka wanaagsan!
Ah, maya, laakiin waxay ahayd inaad baxdo oo aad wacdo tuug internet-ka ku xeel-dheer, dulliile iyo qof sharci-darro ah oo iska diiwaangeliyay shirkadda Netflix oo diyaar u ah inay bixiso lacagta adeegga. Morons sidaada oo kale ah ayaa u soo baxa inay ka faaloodaan taas kaliya markay fahmi waayaan qiimaha xorriyadda.
Haa, waan sii wadi doonaa inaan ku soo dejiyo filimada Torrent markasta oo aan rabo. Oo markaan dareemo inaan lacag ku bixinayo filimada oo aan awoodo, waan sameyn doonaa. Aniguna waxaan rajaynayaa, Michelle, in waxa aan go'aansado inaan sameeyo iyo sida "anshaxdarrada" ah ee aan u go'aansado inaan u dhaqmo ay kuu qiimayn doonaan adiga, maxaa yeelay faallooyinkaan ka dib, waxaad dhihi karto ayaa ii qiimeyn doona hooyooyinka.
mertxe Pasamontes dijo
Nidaamyada bilaashka ah waxay dhibaatadan ku heli doonaan in muddo ah. Kuwa doonaya inay "wax naga iibiyaan" kuma faraxsana in lagu qabtay adeegyo "bilaash ah". Waxaan qiyaasayaa inaad aragto waxyaabaha ka hor imanaya ee iyaga u malaynaya….
Jawaab Mertxe Pasamontes
Victor Hugo Garcia-Cortez dijo
Mid ka mid ah sababaha kale ee inbadan oo naga mid ahi u joojiso helitaanka alaabada ama adeegyada asalka ah, waxay muujineysaa sida "intee in le'eg" aan ugu aaminsanahay soo saarayaasha madadaalada waaweyn
Jawaab Victor Hugo Garcia Cortez
Oo waxay rabaan inay la dagaallamaan burcad-badeednimada. Waxaan diyaar u ahaa inaan shaqaalaysiiyo.
Jawaab Heiko 7017
Midkoodna netflix iyo voddler midkoodna. Maxaa daawo ah, waa inaan sii wadnaa isticmaalka bittorrent si aan ugu daawano filimada kumbuyuutarka
wanaagsan, maxaa fiican in laga fogaado qashinkaas
Jawaab alejandro saldaña magaña
Safarka Ezekiel dijo
Waa inaad fiirisaa sundaytv.com.
Waxay umuuqataa mid aad ugafiican netflix, way ka raqiisan tahay waxayna sifiican ugushaqeysaa Linux.
Netflix oo tagaya M…., Sida ay nalooga indho tirayaan waa inaan iska indhatirnaa.
Anigu waxaan ka mid ahay macaamiisha Netflix ee Mexico xaqiiqduna waxay tahay inkasta oo aysan xumaan hadana wax weyn maahan sidoo kale ... waan baajin doonaa Netflix isla marka uu dhaco.
Ku jawaab Ezequiel Partida
Waad ku mahadsan tahay xogta!
Maanta waxaa jira maqaal ku saabsan mowduuca.
Nofeembar 19, 2012 04:55 am, Disqus wuxuu qoray:
Carwada Alvaro dijo
Waxaan kuu sheegayaa inaan ka helay xal shabakada si aan ugu raaxeysto
ee NETFLIX ee ubuntu aniga oo aan daaqad daaqeyn, kaliya qor
terminal-ka labadan amarro waana taas. Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto maxaa yeelay
way ii shaqaysay.
sudo apt-get update && sudo apt-get rakib netflix-desktop
Ka dib rakibidda, tag bidixda kore ee kanaga
shaashadda oo fur furaashkaaga Midnimo oo raadso Netflix oo socodso barnaamijka. Tani
Waxay kuu abuuri doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay markii ugu horreysay ee aad shaqeyso. kadib markaad gasho
NETFLIX waxaad ku xushay fiidiyoow aad daawato, Silverlight ayaa ku weydiin doonta haddii
awood u yeelo waxyaabaha ku jira DRM. Fadlan karti u yeelo Fiidiyowga Netflix waa
Barnaamijka Netflix wuxuu ku bilaaban doonaa qaab shaashad buuxda ah. Waad ka tagi kartaa
gabi ahaanba adoo riixaya ALT + F4. sidoo kale waad riixi kartaa F11
si aad uga baxdo qaabka shaashadda oo buuxda.
Jawaab Alvaro Feria
Waa inaad fahamtaa inaysan ahayn arrin muhiimad gaar ah leh laakiin tirooyin, dakhliga soo gala. Xaqiiqdu waxay tahay inaanan weligey fahmin sababta aysan jirin taageero weyn oo loogu talagalay codsiyada hoosta Linux, laga yaabee sababtoo ah inaysan jirin wax taageero ganacsi ah oo ka dambeysa? Laakiin waxaan leenahay RHEL, SLES iyo SLED, Ubuntu, iwm. Waxaa laga yaabaa sababtoo ah ma jiro madal guud ama nooc guud oo loo qaybiyo dhammaan? Ma garanayo, waxaas ayaa ah, wax fikrad ah kama haysto waxa uu yahay Netflix!
Kordhin si loo dhigo Gnome Shell Dock midigta